Xubnaha Su'aalaha La Weydiiyo - Caymiska Caafimaadka Deegaanka ee Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Xarunta Xubinta > Xubnaha Su'aalaha la Weydiiyo
Jawaabo ka hel su'aalaha daryeelka guud isla markaana ka faa'iideyso xubinnimadaada CHPW.
Kahor intaadan sameyn xulashooyinka daryeelka caafimaad ee saxda ah adiga iyo qoyskaaga, waa inaad heshaa macluumaadka aad u baahan tahay. Boggan, Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington (CHPW) wuxuu uga jawaabay qaar ka mid ah su'aalaha xubnaha guud.
➔ Fiiri su'aalaha guud ee Apple Health (Medicaid)
Fiiri Su'aalaha Caafimaadka Habdhaqanka.
Helitaanka daryeel iyo adeegyo
Sideen balan u sameystaa?
Si aad ballan u sameysato, wac rugtaada caafimaadka ama xafiiska dhakhtarkaaga. Haddii aad u baahan tahay caawimaad si aad u heshid lambarka taleefanka, isticmaal annaga tusaha bixiyaha internetka.
Markii aad wacdo si aad ballan u sameysato:
U sheeg haddii aad tahay xubin cusub oo ka tirsan CHPW.
Haddii aad u baahan tahay turjubaan, fadlan haka waaban inaad weydiisato mid.
Hayso Aqoonsigaaga Xubinnimada CHPW haddii shaqaalaha rugta caafimaadku ay macluumaad uga baahdaan. Si aad u daawato ama u soo dejiso kaarkaaga, u dejiso ama u gal gal koontadaada xubin.
Haddii aad u baahan tahay caawimaad si aad u hesho ballan, inaad u tagto ama ka timaad xafiiska bixiyahaaga, sameynta qorshe daryeel si aad u taageerto baahiyahaaga caafimaad, ama haddii ay jiraan waxyaabo kale oo kugu adkeynaya inaad hesho daryeel, waan caawin karnaa. CHPW waxay leedahay barnaamij la yiraahdo Maareynta Kiiska wax ka qabashada baahiyaha noocan ah.
Maareynta kiiska waxaa lagu heli karaa iyada oo aan kharash dheeraad ah laga helin dhammaan xubnahayaga. Wac Adeegga macaamiisha inaad kubilaawdo maaraynta dacwada ama aad waxbadan ka barato.
Sideen ku ogaadaa haddii aan arko dhakhtar?
Haddii aad u malaynayso in adiga ama qof aad daryeelayso uu ku jiro xaalad caafimaad oo degdeg ah ama mid dhimir ah, wac 911 ama aad cisbitaalka kuugu dhow.
Bixiyaha Daryeelka Aasaasiga ah: U tag daryeel bixiyahaaga aasaasiga ah daryeelka joogtada ah sida baaritaannada iyo tallaalada, haddii aad maareynaysid cudur daba-dheer, haddii aad u baahan tahay u-diritaanka takhasusle, ama haddii aad hesho wax la mid ah xasaasiyad khafiif ah ama hargab oo aadan u baahnayn dhakhso fiiro gaar ah.
Khadka Talo bixinta Kalkaalisada: Xubnaha CHPW waxay marin u helaan talo ka helaan kalkaaliyayaal aqoonyahanno ah 24 saacadood maalintii, toddobo maalmood usbuucii 1-866-418-2920 (TTY: Garaac 711). Waxaad wici kartaa Khadka Talobixinta Kalkaaliyaha caafimaadka adiga oo leh su'aalo caafimaad oo badan oo kala duwan. Tusaale ahaan, waad wici kartaa si aad u weydiiso haddii ilmo ooyaya u baahan yahay daryeel caafimaad, ama haddii astaamahaadu u baahan yihiin booqashada dhakhtarkaaga.
Daryeelka Virtual: Tiro sii kordheysa oo ka mid ah bixiyeyaasha daryeelka caafimaadka iyo rugaha caafimaadka ayaa kuu oggolaanaya inaad jadwal ku sameysato booqashooyinka dhakhtarka taleefan ama wicitaan fiidiyoow. Kaliya maheli kartid inaad hesho daryeel caafimaad adigoon gurigaaga kabixin, laakiin booqashooyinkaan daryeel ee kama-dambeysta ah waxaa laga yaabaa inay leeyihiin saacado dabacsan oo ka badan rugta kuugu dhow CHPW waxay kaloo bixisaa adeeg daryeel dalwad ah iyadoo loo marayo CHPW Virtual Care.
Daryeelka degdegga ah: Daryeelka degdegga ahi wuxuu bixiyaa daryeel aan degdeg ahayn 24 saacadood maalintii. Tusaalaha arrimaha daryeelka degdegga ah waa haddii ilmahaagu ku soo tooso saqbadh dhexe qandho ama matag.
Qolka Gurmadka: Qolka gurmadku wuxuu furan yahay 24 saacadood maalintii, toddobo maalmood usbuucii. Waxaa loogu talagalay dhaawacyada halista ah ama arrimaha leh astaamaha nolosha khatarta ku ah. Tusaalooyinka qaarkood ee u baahan lahaa daryeel deg deg ah waa: gubasho daran, shilalka baabuurta, isku dayyada ismiidaaminta, neefta oo ku qabata, xabad xanuun, calool xanuun daran, dhiig bax aan joogsan doonin.
Ka waran haddii aan doonayo ra'yi labaad oo ku saabsan daryeel caafimaadkayga?
Waxaad xaq u leedahay inaad hesho aragti labaad.
U sheeg dhakhtarkaaga aasaasiga ah taasi waa waxa aad rabto. Waxay kuu gudbin doonaan adeeg bixiye kale oo ka tirsan shabakadda CHPW oo leh caddeynno la mid ah, ama mid waad ka dooran kartaa liiska bixiyahayaga.
Waa maxay maaraynta adeegsiga?
Maareynta ka-faa'iideysiga ayaa ah geedi socod dib-u-eegis ah haddii daryeelku caafimaad ahaan lagama maarmaan u yahay kuna habboon yahay bukaannada.
Waxaan qiimeynaa daryeelka intaan la siinin (oggolaansho hore), inta la siinayo (dib u eegis isku mid ah), iyo ka dib marka la bixiyo (dib u eegista adeegga ka dib). Nidaamkeenna waxaa loogu talagalay in lagu hubiyo habboonaanta, baahida caafimaad, iyo waxtarka adeegyada daryeelka caafimaadka, habraacyada, iyo goobta adeegga ku habboon.
Dib-u-eegista waxaa sameeya shaqaalaha shatiga ku habboon leh, oo ay ku jiraan - laakiin aan ku xaddidnayn - kalkaaliyayaasha caafimaadka, agaasimaha caafimaadka, iyo farmashiistayaasha. Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee shaqaalaha Washington ayaa diyaar u ah inay ka wada hadlaan wixii ku saabsan habka maaraynta isticmaalka, oggolaanshaha, ama diidmada.
Oggolaanshaha hore dib-u-eegiddu waa habka dib-u-eegista adeegyada caafimaadka, qalliinka, iyo caafimaadka dabeecadda qaarkood. Tani waa in la hubiyo baahida caafimaad iyo ku habboonaanta daryeelka la buuxiyo ka hor intaan adeegyada la keenin.
Dhakhtarkaygu wuxuu gudbiyay codsi ogolaansho hore. Mudo intee le'eg ayay qaadan doontaa in dib loo maqlo?
Caadi ahaan, codsi caadi ah waa inuu lahaadaa go'aan isla markaana uu ogeysiin ku bixiyaa shan maalmood gudahood laga bilaabo marka laga helo codsiga dhakhtarkaaga. Haddii aan macluumaad dheeraad ah uga baahanno adeeg bixiyahaaga waqtigan waa la kordhiyay. Waxaa laguugu soo ogeysiin doonaa boostada markii go'aanka la gaaro.
Xaaladaha qaarkood, bixiyahaaga ayaa laga yaabaa inuu go'aamiyo caymiska codsi gaar ah in si deg deg ah go'aan looga gaaro. Xaaladahaas oo kale, codsi deg deg ah wuxuu go'aan ku yeelan doonaa laba maalmood gudahood laga bilaabo maalinta dhakhtarkaaga laga helo codsiga. Haddii aan macluumaad dheeraad ah uga baahanno adeeg bixiyahaaga waqtigan waa la kordhiyay.
Ma arki karaa dhakhtar aan ku jirin liiska bixiyahaaga?
Waxa kaliya ee ka reeban waa xaaladaha degdegga ah, daryeelka degdega ah ee loo baahan yahay marka shabakada la waayo (guud ahaan, markaad ka maqantahay goobta adeegga), adeegyada sifeynta aagagga ka baxsan, iyo kiisaska aad ka heshay oggolaansho hore dhakhtarkaaga CHPW.
Sideen u badali karaa dhaqtarkayga?
Waad beddeli kartaa dhakhtarkaaga sababta oo ah waad guurtay, ama haddii aad dareento raaxo badan oo aad la leedahay dhakhtar kale. Sabab kasta ha noqotee, waxaad ka beddeli kartaa mid ka mid ah shabakadda bixiyaha CHPW una beddela mid kale wakhti kasta:
Online: Gal xisaabtaada xubin xubin dhakhtarkaagana beddel
Na soo wac. Kooxdayada Adeegyada Xubnaha waxay ku farxi doonaan inay kaa caawiyaan inaad beddesho dhakhtar
Email Daryeelka Macaamiisha
Sideen ku ogaan karaa in daawadaydu daboolayso?
Sannad kasta, waxaan daabacnaa qoraal, oo sidoo kale loo yaqaan "liiska daawooyinka la doorbido." Waa in aad dib u eeg liiskaan si loo go'aamiyo heerka dawadaadu ku jirto iyo haddii ay jiraan wax xaddidaad ah oo ku saabsan.
Xagee ka buuxin karaa dawooyinka aan qoro?
Waxaa jira saddex siyaabood oo aad ku diyaarin karto in guriga laguu soo qoro.
CHPW waxa kale oo ay leedahay shabakad balaadhan oo farmashiye ah oo ku baahsan Washington, Oregon, iyo Idaho, oo ay ku jiraan meelo badan oo ka mid ah Xarumaha Caafimaadka Bulshada ee iskaashatada. Si aad u hesho farmasiga kuugu dhow, waxaad awoodaa:
Gal koontadaada myCHPW oo raadi farmasiga
Gal koontadaada Express Scripts *
Baadh Haga Farmashiyaha
Keen kaarkaaga Aqoonsiga CHPW markaad qaadanayso dawadaada. Haddii aadan haysan kaarkaaga, waxaad ka gali kartaa Xarunta Xubinta ee CHPW si aad u daawato, u soo dejiso, ugana daabacato nuqul ka mid ah.
Caymiskaygii waa la joojiyay. Sideen ku soo ceshaa?
Hadaad lumisay caymis 60 maalmood ee la soo dhaafay, wac adeegga macaamiisha CHPW.
Hadaad lumisay caymis in ka badan 60 maalmood ka hor, ka wac Washington Healthplanfinder halkan 855-923-4633.
Cusbooneysiinta macluumaadka shakhsiga ah iyo la xiriirida qorshaha
Sideen ula xiriiraa qorshaha?
CHPW waxay halkan u joogtaa inay ka jawaabto su'aalahaaga oo aad wax ka qabato walaacyadaada, sidaa darteed waxaad dooran kartaa habka ugu fudud ee lagula xiriiri karo:
Taleefan ahaan. Na soo wac at 1-800-440-1561 (TTY Relay: Garaac 711). Waxaan diyaar u nahay inaan wicitaanadaada qaadano Isniinta ilaa Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo
Iimayl ahaan. Email noo soo dir wakhti kasta oo maalin ama habeen ah [emailka waa la ilaaliyay], oo waxaan dib kuugu soo laaban doonnaa Isniinta ilaa Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo
Iyada oo loo marayo bogga myCHPW. Dashboard-kaaga 'myCHPW', ku dhex mari Adeegyada Is-Xubinta > Farriimaha aaminka ah. Farriimaha sugan waxay la mid yihiin emayllada, laakiin waxaa keliya oo laga heli karaa iyada oo loo marayo myCHPW.
Waan dhaqaaqay. Sideen u beddelaa cinwaankayga iyo / ama lambarka taleefankayga?
Markaad guurto, hubi inaad u sheegto hay'adaha gobolka ee soo socda:
Xafiiska Adeegyada Bulshada ee deegaankaaga. Call 1-877-501-2233.
Kadib wac Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington! Waan cusbooneysiin doonnaa cinwaankaaga iyo macluumaad kale. Waxaan sidoo kale kaa caawin karnaa inaad doorato Bixiyaha Daryeelka Aasaasiga ah ee cusub, haddii loo baahdo.
Si aad noola soo xiriirto, ka wac Adeegga Macaamiisha halkan 1-800-440-1561 (TTY Relay: Garaac 711), 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, Isniinta ilaa Jimcaha.
Magacayga waan badalay. Yaan la xiriirayaa?
Markaad bedesho magacaaga, waxaad u baahan doontaa inaad cusboonaysiiso macluumaadkaaga shaqsiyeed:
Call Adeegga Macaamiisha ee CHPW at 1-800-440-1561 (TTY Relay: Garaac 711), 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, Isniinta ilaa Jimcaha.
Hadda ayaan ilmo dhashay waxaanan jeclaan lahaa inaan ka qoro Apple Health. Sideen ku sameeyaa taas?
Hambalyo! Fadlan soo wac Washington Healthplanfinder at 855-923-4633, oo way kugu bilaabi karaan adiga.
Waa maxay myCHPW / xariirka xubinta?
myCHPW waa boggayaga internetka ee kuu oggolaanaya inaad aragto macluumaadka caymiska muhiimka ah. Waxaa laga heli karaa taleefan, kiniin, ama kombiyuutar.
MyCHPW, waxaad ku:
U fiirso macluumaadka dhammaan qorshooyinkaaga caymiska ee kala duwan, annaga oo keliya ma aha.
Eeg macluumaadkaaga caymiska iyo dheefaha.
Hubi heerka oggolaanshahaaga iyo gudbintaada.
Dalbo nuqul kaarkaaga Aqoonsiga CHPW.
Raadi adeeg bixiyeyaasha iyo tas-hiilaadka.
Na weyddiiso inaan beddelno bixiyahaaga daryeelka aasaasiga ah.
Cusbooneysii macluumaadkaaga xiriirka.
Weydii su'aalaha kooxdayada Adeegga Macaamiisha adoo adeegsanaya nidaamkeena aaminka ah.
Hel ogeysiisyo gaar ah iyo cusbooneysiin guud.
Waxbadan ka baro dheefaha iyo sheegashooyinka.
Dib ugufiiri sharaxaadaada dheefaha (EOB) ee myCHPW. EOB waa warbixin tilmaamaysa adeegyada aad heshay, inta biilasha laguu soo diray, iyo waxa la bixiyay.
Maxaan sameeyaa haddii aan helo biil?
Marka loo eego qorshaha CHPW Apple Health ee shakhsiyaadka, waa inaan lagugu soo dallacin adeegyada la daboolay (oo ay ku jiraan kuwa aad horay u heshay oggolaansho).
Haddii ilmahaagu ku hoos jiro a Apple Health oo qiimo jaban oo loogu talagalay carruurta leh qorshaha Premium, waxaad heli doontaa biil qiimo jaban bil kasta ah.
Haddii aad hesho biil aadan fahmin ama aad u maleyneyso inuu qaldan yahay, nala soo xiriir at 1-800-440-1561 (TTY Relay: Garaac 711), Isniinta ilaa Jimcaha, laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo
Ka waran haddii aanan ku qanacsanayn adeegyadayda iyo daryeelkayga?
Waxaad xaq u leedahay daryeel fiican. Waan ka xunnahay inaan maqalno inaadan khibradaas u lahayn CHPW.
Si aad u gudbiso cabasho (cabasho) oo ku saabsan adeegyada ama daryeelka aad heshay, naga soo wac 1-800-440-1561 (TTY Relay: Garaac 711). Waxaan diyaar u nahay inaan wicitaanadaada qaadano Isniinta ilaa Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo